Crisis ee Bendgate u iPhone 6 -
iPhone 6 qaaday daran markii users bilaabay cabanaya cillad weyn ee design ku isqaloocinta ee jirka ka mid ah casriga ah hoos qaar ka mid ah cadaadis, gaar ahaan in marka telefoonka waa la hayaa in jeebka ah oo la isku dhow yahay surwaal / jiinis. Sawiro bilaabay daad internetka meydadka Aluminum si bayaan ah qaloocsan ee iPhone 6. Dadka iibsaday this siyaalaha cusub ee casriga ah oo muujinaya bilaabay cayaaraya shirkadda Apple - in la og yahay in ay soo saaraan si qurux badan miiqan, qibradiisa loogu talagalay iyo caymiska qalabka korantada shakhsi - isagoo sheegay in cusub smartphone sleeker awoodin inuu istaago in ay dharka iyo gaashaanka ee jooga jeebka dhagan.
Apple, si kastaba ha ahaatee, waxa uu ku jawaabay in cabashooyinka kuwaas oo sheegay in arrinta Bendgate ma aafo cudur laakiin Xaalad aad u dhif ah. Shirkadda bixisaa si uu u badalo free smartphone la'aan haddii ay dhibaato ka soo Bendgate, waxa la siiyaa oo ansixiyay ee Visual farsamo Inspection.
Waa maxay Bendgate?
Isqaloocinta ee iPhone 6 Plus oo culeys ku kasbatay magac aan rasmi ahayn loo yaqaan 'Bendgate'. Erayga noqday viral iyo daadadku Internet kor su'aalo ku saabsan tayada Apple ee casriga ugu dambeeyey. iPhone 6 Plus iyo walaalaha iPhone 6 daraan milled Aluminium in ay design, in waa nuur-miisaamaa inkastoo cimri dherer iyo xoog. Isku ee size ballaadhan oo shaqo profile khafiif ah oo ka samaysan bir Aluminum malleable sababa jiifku ay in la leexiyo iyo awooddiisa agagaarka ugu xasaasi ah, oo u dhow furayaasha mugga.
Saddex caan ku iPhone Laabista Imtixaanada
Rabshaddii ku saabsan isqaloocinta 6 iPhone la ledhay oo la xaqiijiyay ridis ah ka dib markii la baadhay iyada oo imtixaanada isqaloocinta sayniska. Imtixaanka laabaya in hoos ayaa looga sharax taxadir iyo dabacsanaan ah iPhone 6 / iPhone 6 Plus.
# 1. Laalaab Test Saddex-Point ayaa:
Wararka Consumer ayaa lagu sameeyaa imtixaankan codsanaya cadaadiska ee dusha sare ee telefoonka halka gelinayo booska qabsaneyso balantaada u dhexeeya labada blocks alwaax. The Instron riixo Test Machine waa machine-sax sare ah oo loo isticmaalo in lagu cabbiro awood u codsatay. Ciidamada of 10 pounds waxaa laga codsadaa 30 ilbiriqsi oo waxaa markii dambe u kordheen 10 pounds isabdal ah. The isabdal ah in cadaadis la joojiyay markii shaashadda telefoonka yimaado dabacsan dacwadda.
Natiijada imtixaanka waxay ahayd in iPhone cusub oo qaba dhaawacyo ka soo trauma Bendgate ah, waa adag ah iyo istaagi kara ilaa isticmaalka caadiga ah maalin kasta. Waxay qaadatay 90 pounds xoog si ay u bilaabaan lahayo ku ah oo ka mid ah iPhone iyo 110 pounds daaha in Keligiin kaalaya. Faahfaahin dheeraad ah halkan >>
# 2. Ganacsiga Test Square The:
Square Trade waa qorshe ilaalinta sare loo qiimeeyo ee loo yaqaan ay adeeg degdeg ah oo gaar ah. Baaritaanka Square Ganacsiga (farsamo yaqaan Square Ganacsiga Laabista Test) ayaa ku dhawaaqay natiijada ka dib markii imtixaanka breakability oo ka mid ah casriga ugu sareysa keentay. Imtixaanku wuxuu ka, marka lagu sameeyo iPhone 6 iyo walaalaha iPhone 6 Plus caddeeyeen in labada casriga ah waa adag ah iyo dhaliyay sare ee Score Breakability in ay category kala. Imtixaanku wuxuu ka bixisaa yardstick ah si loo cabbiro cimri dherer waxyaabaha ah 'oo ay iyaga imtixaanka inta badan xaaladaha maalin kasta in dadka isticmaala ku dul casriga ah ka soo.
Baaritaanka waxaa ka dhashay in saddex gunaanad:
1. casriga ah iPhone 6 Plus waa muddo dheer marka la barbar dhigo telefoonada screen ugu waaweyn.
2. iPhone 6 Plus goolal qoraalkii hore ee iPhone in Test Breakability ah.
The screens ah iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus labadoodaba si fiican u sameeyaa baaritaanka ka bixinaya rumaysan in galaas ra'iyi-xoojiyey Apple ee. Faahfaahin dheeraad ah halkan >>
# 3. Baaritaanka Buugga laab
Baaritaankaan waxaa loo sameeyaa by user YouTube ah Lewis ka Unbox Therapy. Muuqaalka imtixaanka waxay noqotay viral ugu dhaqsaha badan ka dib markii ay sii daayo iyo bilaabay Buuqa Bendgate ah. Sturdiness ee iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus ku imtixaamay dhigista kalfadhi oo gacnta lagu qasbay. Natiijada baaritaanka waxa ay shaaca ka qaaday in kaalinta ugu liita ee labada telefoonka waa ka hooseeya badhamada mugga oo u dhaqmo sida mashiinka kala wada iPhone xodan ah. Faahfaahin dheeraad ah halkan >>
Sida loo fogow Laabista ah iPhone 6
Dunidu hadda waa ogyahay oo ku saabsan cillad ugu weyn ee design ee iPhone 6 in ay tahay xad-dhaafka ah dabacsan. Kuwa ay u tuuritaanka galay jiinis dhagan 'jeebka dib ka dibna sireed saacado kala soo ogaadeen in ay iPhone ayaa qaaday foororsado ah, isha ku dhowaad sida madaxweyne rukuucsan in qaar ka mid ah xoogga leh oo saliid uu doonayo. Ku takhasusay ayaa si kastaba ha ahaatee sheegay in lahayo ku waxuu noqon karaa mid joogto ah. Si looga fogaado garaacid dukaanka Apple si uu ugu laabto aad jabantahay iPhone, waa in aad raacdo tilmaamaha la siiyey sida talaabooyin taxaddar ah si loo badbaadiyo casriga ah ka masiibadiisa oo yiri:
• Iska ilaali gelinaya aad casriga ah ee jeebkaaga dib. Ma aha oo kaliya giigsan aad joog oo jiinis waxaa suffocating u iPhone, waxa ay sidoo kale ka dhigaysa aad eegto dhigmin la xoojinta dadejiyaan.
• Sii isticmaalka badan oo qurux badan si ay meesha ku habboon in qalinka - jeebkaaga hore. Saarid casriga ah ee jeebka hore ee maaliyada waa shaki la'aan geeky iyo Retro laakiin waxaa ka badbaadiyay aad iPhone qaali ah ka Bendgate. Waxaa dheeraad ah calaamad in ay xirtaan aad iPhone dhow qalbigaaga ka badan dhow guntooda aad.
• Mid ka mid ah xalka waa iska cad in ay ka fogaadaan isku dayaya in la leexiyo aad iPhone gacanta, si ay u hubiso sturdiness ka dib markii ay arkeen malaayiin sawiro ku saabsan internetka.
• Waxaa jira kiisas badan oo laga heli karo suuqa kor u qaadi kara rigidity dhismaha ah ee aad iPhone iyo aad u tudhin dhibaato ka qabo in ay qaadaan aad kabuufi misshapen dukaanka Apple.
Waxa la Sameeyo Haddii aad ka Cabanaayo Bendgate Durba?
Xaaladdan oo kale waa goor dambe oo aad iPhone ayaa ka arin isnacsiiyeen Bendgate, waxaad raaci kartaa xal in laga yaabo in aan hagaajin qaloocsan dhismaha ah, laakiin ugu yaraan caawimaad, waxaad badbaadinaysaa xog muhiim ah ku kaydsan ee casriga ah.
• dukaanka Apple Qaado iPhone. Shirkadda bixisaa si ay ugu bedesho casriga ah ee dhibaatadu ka soo calaamadaha Bendgate bixiyo ay ku baasaan baaritaanka lagu kormeerka muuqaal ah oo ku hoos jira shuruudaha damaanadda.
• Si aad u soo kabsado xogta la badbaadiyey ee casriga ah, waxaad isticmaali kartaa mid ka mid ah qalabka ugu wanaagsan ee dib u soo kabashada xogta in yimaadaa magaca Wondershare Dr. Fone ee macruufka . Iyada oo taageero ka codsigan, waxaad soo kaban karto xogta ka smartphone aad u burburay fudayd.
macruufka 8 / iPhone Recovery Message 6 Text
3 siyaabood ee dib u soo ceshano xogta lumay ka iPhone
Taageer qalabka kala duwan: Ka sokow 5s iPhone taageero, iPhone 5, iPhone 4s, oo lagu daydo hore ka badan, waxa ay taageertaa iPhone 6, iPhone 6 Plus iyo macruufka dambeeyay 8
Hababka 3 kabashada: Ladnaansho xogta laga qalabka macruufka, hayaan Lugood iyo iCloud.
Save fariimaha in qalab ama computer: Save kabsaday fariimaha qoraalka ah si toos ah aad iPhone ama si aad u computer.
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh supportted: xogta kulanka xiisaha leh in ka hor inta aad go'aansato in aad u soo kabsado.
Haddii ay dhacdo in aad u jecel yahay inuu u isticmaasho gurmad iCloud si loo soo celiyo xogta ku saabsan qalabka macruufka, raac tallaabooyinka la siiyo si taxadar:
1. Ku rakib iyo abuurtaan codsiga aad kombuutarka. Connect qalab macruufka in kombuutarka.
2. Marka Wondershare Dr.Fone ee suuqa kala macruufka furmay, riix ka soo kabsado iCloud kaabta File doorasho ka dhinaca kore ee midig.
3. Awoodda in aad sax Apple aqoonsiga ID duurka ku heli karo.
4. Sug software in ay dib u soo ceshano macluumaadkaaga gurmad ka iCloud ah.
5. Marka macluumaadka la baxey, riix Scan iyo Download joogo button ee xaq u matalaya aad iPhone.
Fiiro gaar ah: oo dhan macruufka qalabka qaab interface ayaa lala xiriirinayay in aad xisaabta.
6. Dooro file ah in aad rabto in aad dib u soo ceshano adigoo gujinaya ay folder baahisey ka Murayaad bidix ee interface ka.
7. Ka dib markii la dooranayo, riix Ladnaansho ka geeska midig hoose ee suuqa kala dib u soo ceshano xogta aad lumay button.
Fiiro gaar ah: Si aad u soo ceshano badan files / data, waa in aad raacdo talaabooyinkaas 6 iyo 7 kasta oo si gaar ah u diiday.
Ma ka iPhone 6 Plus Kalidaa jeeda Issue adigoo laabaya?
Inkastoo Bendgate u ekaan kartaa sida korka ka weyn kooxda design ee Apple ayaa, ma aha dhibaatada kaliya ee casriga ah ka arrintan. Sida Bendgate sii wadaan in ay hound Apple, tartameen ayaa dhagax u baarto ahayn inay ku kajamaan oo ku saabsan cillad ugu weyn ee ay xafiiltamaan ee ugu weyn ilaa taariikhda. LG France qaaday jibes ee Apple by Tweets, "casriga ah Our Ha iska laabin, oo ay si dabiici ah qalooca yihiin." Tan iyo waxba lahayn oo dhan Biraha raac sharciyada Physics, casriga ah lagu sameeyo shirkadaha oo dhan ayaa la helay si ay u muujiyaan laabaya oo culeys qaar ka mid ah. Si kastaba ha ahaatee awoodda stress-dhalista ee qalab kasta oo la macmalay oo ay ganacsato kala duwan kala duwanaan karaan.
Square Ganacsiga Laabista Test sameeyo saddex xafiiltamaan ee ugu sareysa Samsung Galaxy 6 Edge, iPhone 6 Plus, iyo HTC Mid ka mid ah M9 shaaca ka qaaday in Samsung waa kuwa ugu nugul ee saddexda ah. Samsung Galaxy 6 Edge xodan iyo qarxay markii codsatay cadaadis ka mid ah 110 pounds. Loo baahan yahay cadaadis A of 110 pounds in la leexiyo 6 iPhone Plus wuuna jejebiyey at 179 pounds oo ah cadaadiska codsatay. The sturdiest saddex ah, sida laga soo xigtay baaritaan ay tani gacnta stress soo baxday in HTC Mid ka mid ah M9 oo muujinaayo laabi 120 pounds.
Baaritaan kale waxaa lagu sameeyaa ayadoo Wararka Consumer ogyahay sida "Saddex-Point laalaab Test 'natiijooyinka soo socda:
Lahayo ku Kala Case
HTC Mid ka mid ah (M8) 70 pounds 90 pounds
Apple iPhone 6 More 90 pounds 110 pounds
Note Samsung Galaxy 3 150 pounds 150 pounds
3 ay xal u qoraalada iPhone gurmad kombiyuutarka
Top 6 iPhone Explorer u Mac iyo Windows PC aad kala dooran karto
> Resource > iPhone > Crisis ee Bendgate u iPhone 6